Isaziso esingxamisekileyo! UXiaomi ubhengeza ukurhoxiswa kweMi Electric Scooter (M365) | I-Androidsis
Isaziso esingxamisekileyo! UXiaomi ubhengeza ukurhoxiswa kweMi Electric Scooter (M365)
Iindaba ezibalulekileyo kubo bonke abasebenzisi abane-Xiaomi Mi Electric Scooter, ekwabizwa ngokuba yi-M365, isithuthuthu sombane sophawu lwaseTshayina. Inkampani inayo babhengeze ukuba bazokwenza imveliso yokukhumbula ngenxa yezizathu zokhuseleko. Kufunyenwe ingxaki echaphazela umdlalo wesithuthuthu. Ke ngoko, inkampani ithatha isigqibo sokubarhoxisa ukunqanda iingxaki.
Esi sisibhengezo samva nje sikaXiaomi, esicela abasebenzisi ukuba bazi ukuba ingaba imodeli yabo ingaba yenye yezo zichaphazelekayo. Inkampani inxibelelane nabo, kodwa bayabhengeza oku kurhoxa kwimithombo yeendaba, ukuze wonke umntu azi.
Kule Xiaomi Mi Electric Scooter kuye kwafunyanwa ingxaki yezokhuseleko. Kuyabonakala ukuba, kwiiyunithi ezininzi ezifanayo, kuye kwafunyanwa oko esinye sezikrufu kwindlela yokusonga sinokukhululwa. Ukuba oku kuyenzeka, kubangela ukuba umqobo ume nkqo, nokuba uqhuba.
Ekubeni inkampani ibeka ukhuseleko lomsebenzisi phambili, jonga ukuba eyona ndlela yokwenza kule meko kukurhoxisa ezi yunithi zichaphazelekayo kwintengiso. Ukujonga ngale ndlela ukunqanda iingozi ezinokubakho okanye iingxaki zokhuseleko kubasebenzisi. Namhlanje sele idluliselwe kubasebenzisi.
Ukuba umfuziselo wakho ukwinto echaphazelekayo eya kuthi ikhutshwe kwintengiso, baya kuba nalo lonke ulwazi oluluncedo kule meko. Ukongeza, ukusuka kwiXiaomi bayakuqinisekisa oko isithuthuthu sakho siya kulungiswa simahla. Ukwenza oku, benza ukuba kufumaneke kubasebenzisi iwebhusayithi apho banayo yonke idatha ebalulekileyo, kunye nokwazi ukuqhubeka. Ungandwendwela kule khonkco.
UXiaomi ufuna ukuxolisa kubathengi abachaphazelekayo Kule ngxaki. Ukongeza kokuzibophelela ekusombululeni ingxaki ngokukhawuleza. Inkampani ithatha amanyathelo okuthintela ukusilela kwaye ibeka ukhuseleko lomsebenzisi kuqala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » Isaziso esingxamisekileyo! UXiaomi ubhengeza ukurhoxiswa kweMi Electric Scooter (M365)
Yonke imidlalo oya kuba nayo kwi-Stadia xa usungulwa
I-WhatsApp ayinakufakwa kwiziphelo zeHuawei ezilandelayo